IMotorola Droid X ngoku isemthethweni, zonke iimpawu zayo zivelisiwe | I-Androidsis
Kumsitho obubanjelwe namhlanje eNew York, iMotorola kunye neVerizon ziveze ezakutshanje Isiphelo sendlela Android yenkampani, nangona sikhumbula ukuba kukho ifayile ye- I-Motorola Droid 2 kwindawo ethile elinde ukwaziswa.
Isiphelo ekuthethwa ngaso yile I-Motorola Droid X, Indawo yokuphela ephezulu kwaye phantse zonke iimpawu zayo zazisaziwa ngokungabikho kwazo ukuze zibesemthethweni kwaye amarhe awakhange abhekise kakubi kuba phantse yonke into enamahemuhemu yayinyani.
El Motorola Droid X inembonakalo Iscreen se-4,3-intshi esine-capacitive screen kunye nesisombululo sama-pixels angama-854 × 480. Iza nomthamo wokugcina wangaphakathi we-8Gb owandiswa ngekhadi le-SD elincinci ukuya kuthi ga kwi-32 Gb.Ikhamera yayo yi-8 Mpx ene-flash ephindwe kabini kunye nomthamo wokurekhoda we-HD.
Ewe ifowuni ephezulu inayo zonke iintlobo zonxibelelwano ezinje ngeWifi, iGPS, iBluetooth, 3G, kwaye kunokwenzeka ukuba uyisebenzise njengendawo yokufikelela kwi-intanethi ubuninzi bezixhobo ezi-5.
Intliziyo yesi sigxina yi Inkqubo ye-3630 Ghz OMAP1 Isantya kunye ne-RAM yayo yi-512 Mb.
Inemakrofoni ezintathu, enye yokurekhoda ividiyo, enye yelizwi kunye neyokugqibela yokucima ingxolo esele ikhona kwindalo esingqongileyo. Unayo Umamkeli werediyo ye-FM kunye nemveliso encinci ye-HDMI ukuze ukwazi ukuyidibanisa ngokuzolileyo nomthombo wangaphandle kwaye ubone iimuvi ezirekhodiweyo, imifanekiso efakiweyo okanye ukudlala umdlalo kwiscreen segumbi lethu lokuhlala.
Ibhetri yayo yi-1.540 mAh, mhlawumbi inqabile, kodwa kuya kufuneka silinde ukuze sazi ukusebenza kwayo kodwa soyika ukuba kuya kuba yinto eqhelekileyo kolu hlobo lwesiphelo.
Esi sikhululo siza kuthengiswa e-United States ukusukela nge-15 kaJulayi ezayo yinkampani yeVerizon kwaye iya kuxabisa i-199 yeedola kwakube kutshintshiswene ivawutsha eyi- $ 100. Kuya kufuneka batyikitye isivumelwano esisigxina seenyanga ezingama-24 kunye nesicwangciso sedatha esixabisa i $ 29,99. Ukuba ufuna ukusebenzisa i-terminal ekulungiseni i-tethering, kuya kufuneka ungeze i- $ 20 ngaphezulu ngenyanga kunye nomda wokukhuphela we-2 GB.
Inqaku elibhaliweyo lelokuba Motorola Droid X izakwaziswa kunye Inguqulelo ye-Android 2.1 kwaye uya kwamkela uhlaziyo kwi-Android 2.2 ngasekupheleni kwehlobo. Inguqulelo entsha ifakwe kule nguqulo ye-Android Ujongano lweMotoblur kwi Motorola.
Esi sigxina siza kuthengiswa e-United States kuphela, kodwa i-Motorola ifunda i-terminal eneempawu ezifanayo ukuyivula kwamanye amazwe.
Ngubani ofuna enye?
Ividiyo | engena
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » IMotorola Droid X ngoku isemthethweni, zonke iimpawu zayo ziveziwe
..Ndifuna enye 🙂
Ukuba yi-CDMA, ngaba oko kuthetha ukuba andinakho ukuyisebenzisa nge-chip, oko kukuthi, ayinakukhutshwa ukuze ndiyisebenzise nomnye umsebenzisi?
Masilinde uhlobo lwe-GSM!
Kufuneka uhambe ngokukhawuleza
Inye yeentsuku ezili-15 ilungile kakhulu
J Juarezj sitsho
molo ungayihlaziya ibe ngu-4.0 ?? Enkosi
Phendula J Juarezj
Molo, bendifuna nje ukwazi ixabiso lale fowuni kwiivenkile zeefowuni
oscar maneul sitsho
yimalini le fowuni
Phendula kwi-oscar maneul
Ndingayifumana njani ibhetri yokubuyisela loo moto?